nodejs Archives - Saturngod
Posted on Updated November 26, 2013 November 26, 2013 by saturngod
NSMag ရဲ့ backend ကို Express.js သုံးပြီး ရေးထားတယ်။ Node.js ကို production မှာ မသုံးဖူးတာရယ် experience ရအောင် ရယ်ဆိုပြီးတော့ သုံးဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီ အကြောင်းကို Experience from NSMag မှာ ရေးထားဖူးတယ်။ Express.js ဟာ ထင်တာထက် ပိုပြီး သုံးရတာ အဆင်ပြေတယ်။ documentation ထက် example code တွေကို လေ့လာပြီး ရေးရတယ်။ Express.js ဟာ Connect middleware ကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် Connect Middleware document ကို အရင်ဖတ်ပြီး သုံးရင် ပိုပြီး နားလည်လွယ်ပါတယ်။ Apple ကို nsmag app update […]
Posted on Updated October 16, 2013 by saturngod
Kickstarter မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ Ghost ထွက်လာပါပြီ။ ထွက်ထွက်ခြင်း ခဏပဲ စမ်းကြည့်ရပြီး hosting ပေါ် တင်ပြီး မစမ်းကြည့်မိဘူး။ SQLite သုံးထားတဲ့အတွက် database က ပြဿနာ မဟုတ်ဘူး။
Simple Node.js TCP chat Server and iOS
Posted on Updated January 31, 2013 November 16, 2012 by saturngod
Node.js 0.4.9 released
Posted on Updated July 1, 2011 by saturngod
Version 0.4.9 မှာတော့ ထူးထူးခြားခြား ပြောင်းလဲသွားတာ မပါပါဘူး။ အကုန်လုံးနီးပါးက bug fixed တွေ လုပ်ထားတာ များပါတယ်။ အသစ်ဆိုလို့ Upgrade V8 to 3.1.8.25, upgrade http-parser. ပဲပါတယ်။ နောက်ထပ် သတင်း တစ်ခုက Node.js version 1.0 မှာ windows အတွက်ပါ ရပါလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီအတွက် Microsoft က ကူညီနေပါတယ်။ Microsoft က သူ့ရဲ့ Windows Azure မှာ node.js run လို့ ရအောင် ဖန်တီးမယ့် ပုံပေါ်ပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော Windows သမားတွေအတွက် သတင်းကောင်းပါ။ သို့ပေမယ့် Driver တွေကတော့ ပြဿနာတွေ […]
Posted on Updated June 5, 2011 by saturngod
Mongodb နဲ့ Node.js ကို ပေါင်းပြီး todo list လေး တစ်ခုဆောက်တဲ့ tutorial လေး စရေးနေပါတယ်။ ၁ ပတ်လောက်တော့ ကြာမယ်ထင်တယ်။ http://blog.mysteryzillion.org/article/making-todolist-with-node-js-and-mongo-part-i/ http://blog.mysteryzillion.org/article/making-todolist-with-node-js-and-mongo-part-ii/
How did I learn ?
Posted on Updated May 31, 2011 May 31, 2011 by saturngod
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ပတ်လောက်က Django အကြောင်းရေးဖြစ်ခဲ့သလို စာအုပ်လည်း ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ စာအုပ် ဖတ်တာကတော့ ထွေထွေထူးထူးရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ iPad ထဲထည့် ရုံးသွားရုံးပြန်ဖတ်။ သောကြာနေ့ည ရောက်ရင် ပြန်စမ်းကြည့်။ တစ်ခါတစ်လေ ရုံးက စောရောက်ရင်တော့ လမ်းမှာ ဖတ်ထားတာ ပြန်စမ်းကြည့်ပေါ့။ စာအုပ် တစ်အုပ်လုံး ဖတ်တာက ၁ ပတ် လောက်ပဲ ကြာတယ်။ Django ကို မတတ်ပေမယ့် သိသွားတယ်။ Django ကို သိသွားပေမယ့် သဘောမကျဘူး။ ဘာလို့ သဘောမကျလည်းဆိုတော့ ကောင်းလွန်းလို့ပဲ။ အရမ်းပြည့်စုံလွန်းတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ သူ့ rule တွေကို လိုက်ရတော့တယ်။ သူ့မှာ ပါတဲ့ Ready Made တွေကို သိချင်လာတယ်။ […]